Jeneraal Jaamac Maxamed Qaalib oo geeriyooday - Caasimada Online
Home Warar Jeneraal Jaamac Maxamed Qaalib oo geeriyooday
Jeneraal Jaamac Maxamed Qaalib oo geeriyooday
Muqdisho (Caasimada Online) – Allaha u naxariistee waxaa caawa magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti ku geeriyooday Taliyihii hore ee ciidanka Booliiska Soomaaliya, Jeneraal Jaamac Maxamed Qaalib.
Sida ay Caasimada Online u xaqiijiyeen xubno ka tirsan qoyskiisa Marxuumka ayaa waayihii dambe bare ka ahaa Jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho, waxaana la sheegay inuu u geeriyooday xanuun ka hayey dhanka wadnaha.
Sanadkii 1933-kii ayey taariikhdu xustay in Marxuum Jaamac Maxamed Qaalib uu ku dhashay degaanka Dhoodi-gaban ee gobolka Sanaag.
Sannadkii 1955-kii ayuu ku biiray ciidanka booliska Soomaaliya, iyadoo sanadkii 1962-kii loo magacaabay Madaxii Sirdoonka iyo Amniga Qaranka Soomaaliya.
Sidoo kale sanadkii 1970-kii ayaa loo magacaabay Taliyihii guud ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed.
Sannadihii 1956-kii ilaa 1957-kii, ayey tariikhdu xustay in tababarro culus uu ku qaatay Machadkii Tababarrada ee Sheekh, kadibna waxa uu tababar kale u tagay Dugsigii Tababarka Booliiska ee Metropolitan Police, London.
Hoos ka eeg sawirradii Marxuumka waayihiisii ciidanka iyo xiliyadii dambe